Global Voices teny Malagasy » Voaràra Rehefa Mety Ho Ranon-javatra Tsy Ho Entina Anaty Fiaramanidina Ao Rosia · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 16 Janoary 2014 23:29 GMT 1	 · Mpanoratra Nina Jobe Nandika avylavitra
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Rosia, Lalàna, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Tsidika, Zon'olombelona, Akon'ny RuNet
Tohin'ireo fipoahana roa tao Volgograd talohan'ny fialantsasatry ny Taona Vaovao [lahatsoratry ny GV -teny anglisy ], niverina nandinika ny fepetrany ny Ministeran'ny Fitaterana ao Rosia mikasika izay azon'ireo mpandeha entina any anaty fiaramanidina. Nitovy tamin'ny an'ny Amerikana ireo fepetra tany aloha, nandraràna ny fitondrana boaty afaka mitahiry ranon-javatra maherin'ny 100ml. Mandràra ny fitondrana ny ranon-javatra rehetra, na fatra toy inona na fatra toy inona, kosa ireo fepetra vaovao. Namoaka fanambaràna ny Ministeran'ny Fitaterana ao Rosia  [ru] tamin'ny 8 Janoary 2014, sady mangataka ireo mpandeha mba hahatsapa izany sy hanaiky fandaminana.
Nanamarika i Ilya Varlamov,  mpitàna bilaogin-tsary malaza :
Ao amin'ny bilaoginy “Echo of Moscow / Akon'i Maosko”, niaro ireo fepetra vaovao naroson'ny manampahefana i Matvei Ganapolsky  [ru], tamin'ny filazàna fa ilaina hisian'ny saina milamina, tsapany rehefa misidina, ny fanelingelenana aterak'ireo fepetram-piarovana. Na izany aza dia nomarihany fa misy fanalalahana sasantsasany ihany ao anatin'ilay fepetra vaovao, amin'ny fanomezan'ny manampahefana alàlana ho an'ireo fangatahana manokana sasany. Raha araka io, nanontany tena ny amin'ny dikany sy ny ilàna ireo fepetra vaovao izy, raha toa ka mbola misy azo atao ihany ny manome alàlana manokana
Nampahatsiahivin'i Maxim Kononenko  [ru] ireo mpamaky azy fa ‘manao ankamerim-botsotra’ fotsiny ny manampahefana, ary mamafy fisalasalàna amin'ny fanamafisana hoe ilaina ny fepetra toy ireny. Notsindriany fa hoe nanao fotsiny izay hiarovana ny asa fitadiavany ireo mpandrindra ny fifamoivoizana an-habakabaka, raha toa ka misy fanafihana mpampihorohoro iray mitranga
Max Katz  [ru] nihevitra ilay fandraràna ho vokatry ny ahiahy lalina taorian'ireo fanapoahana baomba roa tao Volgograd. Manamafy koa i Katz fa tsy ampy hamotehana fiaramanidina raha izay ranon-javatra fotsiny amin'izao, sady nanoratra taratasy iray misokatra ho an'ny Praiminisitra Dmitri Medvedev izy hampitàna io fitarainana io.
Namoaka fanambaràna iray  [ru] ireo tomponandraikitra ao amin'ny seranam-pîaramanidina ao Sheremetyevo, Maosko, tamin'ny 11 Janoary 2014, nampahafantatra ny mpandeha fa azon'izy ireo atao ny mividy ranon-javatra ao amin'ireo toeram-pivarotana tsy tataovan-ketra, aorian'ny nandalovan-dry zareo ny toeram-pisavàna. Mifarana toy izao ilay fanambaràna :
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/01/17/56794/
 lahatsoratry ny GV -teny anglisy: https://globalvoicesonline.org/2013/12/31/twin-acts-of-terror-for-russias-new-year/
 Ministeran'ny Fitaterana ao Rosia: http://www.favt.ru/favt_new/?q=novosti/novosti/novost/3687
 Nanamarika i Ilya Varlamov,: http://zyalt.livejournal.com/970706.html
 nahita ilay fandraràna ho mampisavoritaka : http://aquatek–filips.livejournal.com/633508.html
 Namoaka fanambaràna iray: http://svo.aero/news/2014/3001/